Ka Fiiri Email-kan GIF-ga ah ee Xiisaha Leh ee laga helo Netflix | Martech Zone
In badan oo ka mid ah tilmaamaha ku-habboon ee email-ka ah ee aan akhriyo, khubaradu waxay inta badan ka niyad-jabiyaan suuq-geynta emaylka inay soo saaraan e-mayl hal sawir leh. Weligay ma noqonin qof jecel xeerarka sidan oo kale ah, marwalba waxaan u maleynayaa isku dayga xeelado gaar ah inay mudan yihiin imtixaanka.
Maanta uun, waxaan ka helay e-maylkan cajiibka ah shirkadda Netflix. Waxay laheyd xariiqa maaddada:
Dhaqdhaqaaqa laga shakiyo █████ Ku yaab Netflix Netflix
Markaad furto emaylka, waa hal farriin oo umuuqata inay noqonayso ogeysiis ka yimid Netflix… laakiin sug uun.
Isla markii aan arkay shaashadda oo dhalaalaysa, way i hayaan. Iyo haa… Waan dhagsiiyey oo aan ka duubey fiidiyowga ciqaabta. Haa, waa inaan hadda daawadaa. Yaan jeclayn Frank Castle?
Tags: email emayl ahfirfircoonaanta gifgifnetflix